Processionary caterpillar: àgwà, nkebi na otú e si emeso ha | Green Renewables
Katapila na-eme njem
Portillo nke German | 17/11/2021 10:22 | Gburugburu
La onye na-eme njem Ọ bụ ahụhụ lepidopteran, ya bụ, ọ nwere ọtụtụ usoro metamorphic, gụnyere ọkwa caterpillar ya, ruo mgbe ọ ga-aghọ urukurubụba mgbe ọ tolitere. Ha na-ebi n'ime ọhịa pine nke mpaghara Mediterranean nke Europe na, n'agbanyeghị aha ha, a pụkwara ịchọta ha na cedar na firs. N'ebe ụfọdụ, a na-ewere ya dị ka pesti nke nwere ike imebi ihe ọkụkụ pine. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị a kacha atụ egwu n'oge ọmụmụ.
Ya mere, n'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ị chọrọ ịma banyere processionary caterpillar, àgwà ya na bayoloji.
2 Oge egwu egwu nke katapila na-eme ngagharị
3 Otu esi ebuso katapila na-aga aga ọgụ
4 Otu esi emeso nsị
Aha sayensị nke ahụhụ a bụ Thaumetopea pityocampa, ma na-agafe ọkwa dị iche iche: akwa, larvae ma ọ bụ caterpillars, pupae na butterflies. A na-akpọ mmepe a na Lepidoptera holometabolic.
N'oge ọkọchị, ma ọ bụ karịa na Julaị n'ebe ugwu, caterpillar na-eme njem na-enweta ụdị okenye ya n'ihi na urukurubụba bụ oge ịlụ. N'oge a, ụmụ ahụhụ na-acha aja aja na-acha aja aja ma nwee ike jikọta ya na gburugburu ebe obibi ya. Àgwà ha bụ ịdị na-arụsi ọrụ ike n'abalị, ka ha wee zere mwakpo nke nnụnụ ehihie na abalị.
Ozugbo mating etịbe, pine March ga-ndina nsen na ga-akwa akwa n'ụzọ pụrụ iche, agịga yiri okirikiri, aha ya bụ agịga pine. Ụbọchị 30 ruo 40 ka ọ mụsịrị nwa, caterpillar na-abanye n'ọkpụkpụ ya ma ọ bụ caterpillar, nke nwere ike ịdịru ọnwa 8.
Mgbe ogbo caterpillar ha na-achọ ịgwụ, katapila na-eme ngagharị na-amalite isi n’osisi ahụ rịdata, ha na-agakwa n’ụzọ pụrụ iche n’ihi na a na-agbakọta ha n’ahịrị n’otu n’otu. Nke a bụ ihe mere ahụhụ a ji nwee aha pụtara ìhè, ma mgbe o si n'osisi ahụ rịdata, ọ dị ka ọ na-eso njem nlegharị anya.
N'okpuru iwu nke caterpillars na mgbe e mesịrị Ha ga-aghọ urukurubụba ụmụ nwanyị, ogologo ogologo osisi pine na-erute ala, ebe a na-eli ha wee banye chrysalis ma ọ bụ pupal ha. Oge a ga-adịru ihe dị ka ọnwa 2 wee mepụta urukurubụba okenye nke nwere ike ịdị ndụ naanị otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ.
Oge egwu egwu nke katapila na-eme ngagharị
N'ọkwa katapila ya, caterpillar nke na-eme ngagharị na-aga na nkebi ise, nke ọ na-aghọ ụmụ ahụhụ na-atụ egwu. Ihe e ji mara ya bụ na ntutu isi na-egbu egbu kpuchiri ahụ ya dum. Nke a bụ n'ihi ọnụnọ nke nsi a na-akpọ tamatopine. Ajị katapila nwere ike ịkpata mmeghachi ahụ nfụkasị siri ike na ụmụ anụmanụ na ụmụ mmadụ, n'ihi na mgbe a na-atụ egwu pine pine, ọ na-ahapụ ntutu nke na-aza n'ikuku.
N'ọgbọ nke atọ, caterpillar na-arụ akpa akpa ebe ọ nwere ike iguzogide oyi nke oyi, Otú ọ dị, ọrụ nke larva anaghị akwụsị n'ihi na ọ ga-anọgide na-achọ nri n'abalị. N'ọkwa ahuhu nke ise ya. caterpillars na-enwe oke anyaukwu wee malite iri agịga pine. N'ọtụtụ ọnọdụ, caterpillars anaghị eri agịga ahụ kpamkpam, ma kwụsị ịta ahụhụ n'etiti agịga ahụ, na-eme ka akwụkwọ aja aja na-anwụ nwayọọ nwayọọ na osisi pine na-ele anya na-adịghị mma.
A na-ahụ larvae na ọnwa anọ mbụ nke afọ. N'agbata Jenụwarị na Eprel bụ mgbe ha na-amalite ịpụta, dabere na okpomọkụ nke ọnọdụ ihu igwe na-akpata, a na-ahụ ha ngwa ngwa ma ọ bụ mgbe e mesịrị. N'ime ọnwa ole na ole mbụ, oyi kachasị oyi bụ "akpa ọcha" n'elu pine nke a na-ahụ anya site n'ebe dị anya. Onye ọ bụla n'ime ha nwere ike inwe 100 ruo 200 larvae. Okpomọkụ na-emetụtakwa akwụkwụ ọ bụla, na elu okpomọkụ, otú ahụ ka a ga-amụkwu ndị mmadụ n'otu n'otu.
Mgbe anyanwụ na-apụ n'anya katapila na-apụ otu otu na-achọ nri, ma ha laghachiri n'ụlọ akwụ ha a na-akpọ "akpa ọcha." Mgbanwe ndị ahụ malitere n'etiti Eprel na Mee. Ka okpomọkụ na-ebili, osisi ndị ahụ na-amalite ịda. Ozugbo ha nọ n'ala, ha na-amalite ịbanye n'ime ala ka ha gaa n'ihu na mgbanwe n'ime urukurubụba.
Otu esi ebuso katapila na-aga aga ọgụ
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ọkachamara kwenyere na a pụghị ikewa mmebi nke ụmụ ahụhụ ndị a dị ka ihe dị njọ, ha na-ebute nsogbu n'ubi pine ndị a na-eji eme osisi. N'ihi nke a, E mepụtala ọtụtụ ụzọ iji belata mmetụta nke mwakpo caterpillar na-aga n'ihu.
Nke kachasị dị irè, ọ bụ ezie na isi n'otu oge ahụ, gụnyere ikpochapụ akpa ndị dị na agịga pine. Usoro a adịghị mma maka akpa ndị ahụ dị na agịga njedebe, ebe ọ bụ na nke a na-emebi uto nke osisi. A na-atụ aro mgbe niile ka ị na-agbaba alaka ndị ahụ ebe akpa akpa dị n'ihu iji zere mmetụta nsị nke ntutu isi caterpillar.
Ụzọ ọzọ bụ itinye plastik siri ike, dị ka olulu mmiri, na ala osisi ma jupụta na mmiri. Ekwesịrị ime nke a tupu ngagharị katapila. Mgbe nke a mere, katapila ga-adaba na mmiri wee nwụọ.
N'ikpeazụ, na ụfọdụ n'ugbo e mepụtawo ọkaibe ndu ụzọ iji luso pine parade, gụnyere ọnye nke pheromone "ọnyà" na-adọta ụmụ nwoke, si otú ibelata mmetụta nke mmeputakwa nke a ụmụ ahụhụ.
Otu esi emeso nsị
Butterflies adịghị ize ndụ, ma caterpillars dị. Nsogbu bụ na ntutu isi katapila na-emepụta mmeghachi omume dị ka hives ma ọ bata na akpụkpọ ahụ. A na-ahụkarị nke a n'ihi na ntụpọ uhie na-apụta na mpaghara ahụ ma na-ewekarị iwe. N'ọnọdụ ndị siri ike karị, ha nwere ike ịkpata nsogbu iku ume.
Ọ bụrụ na nke a emee, anyị ga-emerịrị ihe ndị a
Jiri ncha na mmiri saa ebe ahụ iji wepụ ntutu isi ụmụ ahụhụ.
Jiri ude corticosteroid na-agwọ ọrịa ndị dị nro
A na-ewerekarị antihistamines kwa elekere.
N'ọnọdụ ndị ka njọ, ụlọ ọgwụ ga-agba corticosteroids intramuscularly.
Ụdị anụmanụ ndị a na-emetụtakarị anụ ụlọ. Mgbe agbalịchara iji ya mee ihe n'ọtụtụ ọnọdụ, mpaghara ahụ na-ewekarị iwe. Enwekwara mbufụt ma na-enwekarị ọzịza. Mgbe ọnọdụ ahụ na-akawanye njọ, ọ nwere ike mechaa gbanwee necrotic. Ya mere, a ghaghị ịgwọ ya na ọgwụgwọ pụrụ iche, itinye corticosteroids na iji ọgwụ nje mee ihe.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị nwere ike ịmụtakwu banyere caterpillar nke usoro nhazi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Katapila na-eme njem